'पञ्चेबाजा दर्शकले खोजे जस्तै राम्रो ' | Jukson
'पञ्चेबाजा दर्शकले खोजे जस्तै राम्रो '
दर्शकलाई मनोरञ्जनको ‘शतप्रतिशत ग्यारेन्टी’ दिने दाबा गर्दै फिल्म पञ्चेबाजाको यूनिटले प्रचारप्रसारलाई तिव्रता दिएको छ । फागुन ११ गतेबाट देशव्यापी प्रदर्शनमा आउने फिल्म पञ्चेबाजाको प्रचार अभियान अन्तरगत पोखरा आएको टोलीले यो दाबी पेश गरेको हो ।
फिल्मका निर्माता राजेश शाहिले पनि आफूले यसअगाडि निर्माण गरेका फिल्मको तुलनामा पञ्चेबाजा अझै बढि उत्कृष्ट बनेको बताए । ‘फिल्म राम्रो बनाउनका लागि हामीले कुनै कुरामा कम्प्रोमाइज गरेका छैनौँ ।’ निर्माता शाहिले भने–‘दर्शकले हाम्रो कामलाई रुचाउने कुरामा हाम्रो टिम ढुक्क छ ।’
देश दौडाहाको शुरुवाती प्रेस मिट पोखरामा गरेको पञ्चेबाजा यूनिटले फिल्मले दर्शकलाई नयाँ स्वाद पस्कने दाबा समेत ग¥यो । पोखरामा भएको प्रेस मिटमा नायिका जस्मिन श्रेष्ठ, अभिनेता प्रकाश घिमिरे, अभिनेत्री प्रमिला तुलाचन लगाएतको उपस्थिती रहेको थियो । कलाकारहरुले फिल्मबाट निकै आशाबादी भएको प्रतिक्रिया दिए । पोखरा र आसपासमै बढि छायाँकन भएको फिल्मका मूख्य कलाकारहरु भने प्रेस मिटमा सहभागी भएनन् । फिल्ममा सौगात मल्ल, कर्मा, सृजना सुब्बा, बुद्धि तामाङ लगाएतका कलाकारहरुको मूख्य भुमिका रहेको छ ।
पछिल्लो समय यो फिल्मको ‘घिनघिन मादल’ बोलको गीत यूट्युबमा हिट छ । गीत हिट भएसँगै फिल्मको निर्माण यूनिटले फिल्मको व्यापारलाई लिएर अझै बढि आशाबादी देखिएको छ ।
माओत्से गुरुङ १८ वर्ष पछि ‘माछे’ बन्दा
पोखरा लेखनाथ वडा नं. ५ मा एमालेको पुरै प्यानल विजयी
किशोरी अवस्थामा आमा
बेलायतका नेपाली चिकित्सक पनि डा. केसीको समर्थनमा